Local Media - चालु बजेटको खर्चप्रती कांग्रेस नेता डा शेखरको आक्रोसपुर्ण अभिब्यक्ती, कोइराला भन्नुहुन्छ-"हामी मुलुकलाई कता लैजादैछौं?"
चालु बजेटको खर्चप्रती कांग्रेस नेता डा शेखरको आक्रोसपुर्ण अभिब्यक्ती, कोइराला भन्नुहुन्छ-"हामी मुलुकलाई कता लैजादैछौं?"
प्रकाशित समय: मगलवार, ०९ : ३३ बजे असार २४ गते
काठमाण्डौं- मुलुक यतिवेला कम्युनिष्ट सरकारको चरम् चपेटामा छ। दुई तिहाईको म्याण्डेट प्राप्त सरकार बेलगामको घोडासरी अगाडी बढेको छ।
आफुलाई संसदिय अभ्यासको ज्ञाता ठान्ने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ तर प्रतिक्रिया बिहीन।कहिलेकाहीं त यस्तो लाग्छ संसदमा प्रतिपक्ष छ की छैन। कांग्रेस भित्र केही नेता छन जस्ले सरकारका हरेक जनबिरोधी कार्यको बिरोध गर्दै आएका छन्। सरकारको खरो रुपमा बिरोधमा उत्रने नेता हुन् डा शेखर कोइराला।
कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले आज आफ्नो ट्विटर र फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै असारे बिकासका नाममा मन्त्री र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा चालु बजेट सक्ने होडबाजीमा लागेको उल्लेख गरेको छन्।
उनले लेखेका छन्-"चालु बजेट, असार १ सम्म दैनिक पौने २अर्ब खर्च गरिरहेकोमा अहिले करिव सवा ३ अर्ब खर्च भैरहेको छ।हामी मुलुकलाई कता लैजादैछौं?अब पनी हामी गम्भिर बन्ने समय भएन र?" नेता डा कोईरालाले यसलाइ मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको संस्थागत भ्रष्टाचारको संज्ञा पनी दिएका छन्।
डा शेखर कोईरालाको स्टाटस् जस्ताको तस्तै-